Dahab dahab ah, oo sidoo kale loo yaqaan sheen obsidian, sheen obsidian, video
Dahabka dahabiga ah, oo sidoo kale loo yaqaan sheen dahab sheen obsidian ama sheen obsidian waa dhagax ka kooban qaababka goobooyin gaas ah, kana haray socodka lava, iskuxiran lakabyada loo abuuray sidii dhagaxii la shubay oo qulqulaya kahor intaan la qaboojin. Dheecaannadaani waxay soo saaraan saameyn xiiso leh waxay u eg yihiin sheen dahab ah.
Dahabka dahabiga ah waa muraayad si dabiici ah u dhacda oo loo sameeyay dhagax weyn.
Waxaa la soosaaraa marka lafaha jilicsan laga soo baxo Volcano si dhakhso ah u qaboojiya koritaanka kristal yar. Waxaa caadi ahaan laga helaa xuduuda qulqulka unugyada loo yaqaan 'rhyolitic lava flows' oo loo yaqaan qulqulka obsidian, halkaas oo ka kooban kiimikada, maadada silica ee sareysa ay keento viscosity sarreeya taas oo, markay qaboojiso deg deg ah, sameyso galaas dabiici ah oo ka soo baxa lava. Xakamaynta faafidda atomikada ee loo yaqaan 'viscous lava' waxay sharraxaysaa la'aanta koritaanka krista. Obsidian Dahab ah waa mid adag, kala go ', iyo amorphous, sidaa darteed waxay ku jabtaa geesaha aad u fiiqan. Waqtiyadi hore waxaa loo isticmaali jiray soosaaridda iyo goynta aaladda waxaana loo isticmaali jiray tijaabo ahaan sidii finanka qalliinka.
Maahan macdanta dhabta ah maxaa yeelay quraarad ahaan ma ahan dhalada, intaas waxaa u dheer, qaabkeeda ayaa ah mid aad u kala duwan oo lagu tilmaami karo macdanta. Waxaa mararka qaarkood loo kala saaraa sida loo yaqaan 'mineraloid'. In kastoo obsidian Dahab ahi had iyo jeer ku madow yihiin midab, la mid yihiin dhagaxyada mafic sida basalt, iskuxirka obsidian waa mid aad u jilicsan. Obsidian wuxuu badanaa ka kooban yahay SiO2, silikon dioxide, badanaa 70% ama wax kabadan. Dhagaxyada dhagaxa badan ee leh dabeecada 'obsidian' waxaa ka mid ah granite iyo rhyolite. Sababta oo ah 'obsidian' waa mid lagu arki karo Dunida dusheeda, waqti ka dib galaasku wuxuu noqonayaa kiristaalo macdan oo qurux badan leh, ma jiro wax obsidian ah oo laga weynaaday oo ka sii weyn da'da Cretaceous. Burburinta 'obsidian' waxaa sii xajiya jiritaanka biyaha. Haysashada biyo yar marka la dhisayo, gaar ahaan wax ka yar 1% biyo miisaan ahaan, obsidian si tartiib tartiib ah ayuu u biyo noqdaa marka ay ku dhacdo biyaha dhulka hoostiisa, sameysmaya perlite.
Meesha dahabiga obsidian
Habeenki xiddigta leh ee obsidian
Tags Obsidian, Habeen xiddig leh